အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက်အရည်ပျော်စေ China Manufacturers & Suppliers & Factory
အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက်အရည်ပျော်စေ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက်အရည်ပျော်စေ ထုတ်ကုန်များ)
Poisonless အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့အရည်သန့်ရှင်းရေး HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless...
နှစ်မြှုပ်ခြင်းအားအေးစက်စေသော CL7200 အီလက်ထရောနစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာ
နှစ်မြှုပ်ခြင်းအားအေးစက်စေသော CL7200 အီလက်ထရောနစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာ တရုတ်အမည်: octafluoroisobutyl အီ CAS အဘယ်သူမျှမ။ : 163702-06-5 ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်: CL7200 alias ကို: Ethyl nonafluoroisobutyl အီ EINECS မရှိပါ။ မရှိပါ မော်လီကျူးပုံသေနည်း: c6h5f9o မော်လီကျူးအလေးချိန်: 264.09g / mol...
ဓာတုအရည်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းနှစ်မြှုပ်ခြင်းအေး တရုတ်အမည်: octafluoroisobutyl အီ CAS အဘယ်သူမျှမ။ : 163702-06-5 ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်: CL7200 alias ကို: Ethyl nonafluoroisobutyl အီ EINECS မရှိပါ။ မရှိပါ မော်လီကျူးပုံသေနည်း: c6h5f9o မော်လီကျူးအလေးချိန်: 264.09g / mol ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဆိုင်ရာလက္ခဏာများ： Appearance and...
အီလက်ထရောနစ်၏ဖလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက်အရည်အအေးခံခြင်း ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
Precision အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ hydrofluoroether Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ
Precision အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ HFE hydrofluoroether Non-burst Non-ကိုမီးရှို့ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether HFE Permeability: အနိမျ့မျက်နှာပြင်တင်းမာမှု, အသေးစားဒါကိုတော့သို့ထိုးဖောက်နိုင်ပါ။ ဒါဟာအရောင်မဲ့,, နှစ်ဦးစလုံး poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးတည်းဟူသောတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်-friendly...
Precision အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ hydrofluoroether ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်ဆပ်ပြာ
Precision အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Hydrofluoroether ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာက Non-Flammable: ရှိတယ်မရှိဘူးစက်နှိုးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အကမီးသတ်ဥပဒေအားဖြင့်သတ်မှတ်သောအန္တရာယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မထားဘူး။ ထိုသို့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေအရောင်မဲ့, နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်သည့်ကုန်ပစ္စည်း, poisonless...
Precision အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အလြယ္ကူမတည်ငြိမ်မှုမရှိကြွင်းသောဆပ်ပြာ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းအလုံပိတ်သိုလှောင်မှုမှအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်နေရောင်ခြည်ကိုရှောင်ရှားပယ်အပူအရင်းအမြစ်များမှ။ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless...
Precision အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ hydrofluoroether ကောင်းမွန်သောလျော့ပြေဆပ်ပြာ
Precision အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ HFE hydrofluoroether ကောင်းမွန်သောလျော့ပြေဆပ်ပြာ တစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတအရည်ပျော်ပစ္စည်းအဖြစ် Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ, ကကျယ်ပြန့်နိုင်အောင်အပေါ် diluents, တိကျသန့်ရှင်းရေး, အပူ conduction မီဒီယာနှင့်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ကအရောင်မဲ့,, နှစ်ဦးစလုံး poisonless...
အနိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ဆပ်ပြာ Precision အစိတ်အပိုင်းများ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာက c တိကျစိတျအပိုငျးမြှောင်သို့မဟုတ်မှုန်ဖယ်ရှားခြင်းတစ်ခုတည်းအရည်ပျော်ပစ္စည်းသန့်ရှင်းရေးနှင့်ခြောက်သွေ့ system အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ hydrofluoroether (HFE) အရောင်မဲ့,, poisonless...
Precision အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ poisonless အန္တရာယ်ကင်းသန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်
HFE poisonless အန္တရာယ်ကင်းသန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် Precision အစိတ်အပိုင်းများ လုံခြုံရေး: အဆိုပါထုတ်ကုန်, အရောင်ပွင့်လင်း, အလွန်အမင်းနိမ့်အနံ့မရှိ, flash ပါအချက်သည်နှင့်ရှို့ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာသုံးနိုင်တယ်။ OSHA စည်းမျဉ်းများအရ,...
Precision အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အအရောင်မဲ့, သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်
HFE အရောင်မဲ့, သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် Precision အစိတ်အပိုင်းများ ပစ္စည်းအသုံးပြုပုံများ: သောကြောင့်ယင်း၏မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုများ, ယေဘုယျပစ္စည်းများခိုင်မာတဲ့အယ်လကာလီ, ခိုင်မာတဲ့အက်ဆစ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောလျှော့ချရေး မှလွဲ. သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ အာမခံကို ထောက်. , ကအသုံးပြုသူများကိုထုတ်လုပ်မှုကြောင့်မလျှောက်ထားမီ...
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE အထီးကျန်သန့်စင်
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE အထီးကျန်သန့်စင် အဆိုပါ Hydrofluoroether အစွမ်းမဲ့သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျမြား၏ဝိသေသလက္ခဏာများ:0င်များ၏အရည် Environmental ဖော်ရွေ, ODP တန်ဖိုးကိုရှိသည်နှင့်အလွန်နိမ့် GWP တန်ဖိုးကိုသန့်ရှင်းရေး 1. HFE hydrofluoroether; 2.HFE...
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether ထုပ်ပိုး, သိုလှောင်မှုနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသည်ဤသည်အင်္ကျီကို 25kg / စည်နှင့်အတူထုပ်ပိုး, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်အဘို့, အလွယ်တကူသိမ်းဆည်းထားနှင့်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ စက်မှုအင်္ကျီကိုအရောင်မဲ့,, poisonless...
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေး HFE ကောင်းမွန်သောလျော့ပြေ
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက်သန့်ရှင်းရေး HFE ကောင်းမွန်သောလျော့ပြေ အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ဒီထုတ်ကုန် Hydrofluoroether တစ်ဦးဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ဖြေရှင်းချက်ပျော်စေအရောင်မဲ့,, နှစ်ဦးစလုံး poisonless...
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE အရောင်အရည်သန့်ရှင်းရေး
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဘုတ်များအတွက် HFE အရောင်အရည်သန့်ရှင်းရေး အဆိုပါသန့်ရှင်းရေးဆပ်ပြာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: 1.HFE အလွန့်အလွန်နိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ကကောင်းစွာနိုင်ပါတယ် ပျံ့နှံ့ ထွက် နှင့်ခြေရင်းပစ္စည်းမျက်နှာပြင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအပေါက်မှလူစုခွဲနှင့်အပေါ်ယံအခွံ, စိုစွတ်စေသော, solvation...
အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့ HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ
အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့ HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ HFE hydrofluoroether ကောင်းစွာဖြန့်ခြင်းနှင့်ခြေရင်းပစ္စည်းမျက်နှာပြင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအပေါက်မှလူစုခွဲနှင့်အပေါ်ယံအခွံ, စိုစွတ်စေသော, solvation နှင့်သန့်ရှင်းရေးပေါ်စံပြအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ HFE...
HFE အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့သန့်စင်ခွဲထုတ် HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအရောင်မဲ့,, နှစ်ဦးစလုံး poisonless...
အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့အရောင်မဲ့ဆပ်ပြာ HFE (Hydrofluoroether) သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless...
အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက် HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်
အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက် HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် ယင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: 1. သန့်ရှင်းရေးအရည် အလွန်သင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် (54 ℃) နှင့်ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, စစျနိုငျ အတွက်အခန်းကဏ္ဍ...
နျူကလီးယားပါဝါများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် အဆိုပါဖလိုရင်းသန့်ရှင်းရေးအရည်ပျော်ပစ္စည်း, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေထက်ကဒီအရည်ဓာတုနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့ကောင်းမွန်သောလျော့ပြေဖြစ်၏ ကောင်းစွာစီးဆင်းနှင့်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်စနစ်အပူငျ့သှားနိုငျသညျ Fluorocarbon ပစ္စည်းစီးရီး Perfluorinated အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည်။ မြင့်မား...
အင်ဗာများအတွက်ဓာတုအီလက်ထရောနစ်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် ဓာတုအမည်: Perfluorohexene Fluorocarbon အေးအလတ်စားစီးရီး, အရာ Perfluorinated အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။ ငါအင်ဗာ Controller ၏အပူ-General ၏ t ကိုကို C ooling စံပြဓာတုအာဂွန်,...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ဖြေရှင်းချက်ဓာတု
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်အီလက်ထရောနစ်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်ဓာတု ဓာတုအမည်: Perfluorohexene စံပြဓာတုအာဂွန်, ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Fluorocarbon အေးအလတ်စားစီးရီး, အရာ Perfluorinated အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။...
အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက်အရည်ပျော်စေ အီလက်ထရောနစ်များအတွက်အရည်ပျော်စေ အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက် HFE ဆပ်ပြာ အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက် Poisonless အရည် အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက်အန္တရာယ်ကင်းဆပ်ပြာ အီလက်ထရောနစ်များအတွက်အရောင်မဲ့ဆပ်ပြာ အီလက်ထရောနစ် Precision အဘို့သန့်စင် တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့များအတွက်အရည်ပျော်စေ